Hita tao anaty “camera de surveillance”: tratra tao anaty famoran-jaza teny Anosivavaka ireo jiolahy | NewsMada
Noraisim-potsiny! Efa nidoboka eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy ny jiolahy naman’ireto jiolahy tratran’ny polisy teny Anosivavaka Ambohimanarina ireto. Namonjy fety famoran-jaza ry zalahy ka nataon’ny polisy sarika am-pandriana tao amin’ilay fety…
Jiolahy miisa enina mpamaky trano sy mpanao fanafihana mitam-piadiana eny amin’ny faritra Ambohimanarina ireto saron’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahenina (CSP6) teny Anosivavaka Ambohimanarina, ny asabotsy tamin’ny 1 ora maraina teo. Raha ny fanazavana nampitain’ny polisy, avy namaky trano teny amin’iny faritra Anosivavaka iny ireto olon-dratsy ireto. Nisy “camera de surveillance” anefa ireo trano novakin’izy ireo ka voarakitra tao ny sarin’ireo jiolahy. Tamin’ny alalan’ny fanadihadiana nataon’ny polisy no nahalalana fa mamonjy fety famoran-jaza teny Anosivavaka ireo jiolahy, ny asabotsy 15 jona 2019 tokony ho tamin’ny 7 ora hariva. Nidina teny an-toerana ny polisy ka tra-tehaka tao anaty fety tokoa ny jiolahy roa izay nandray anjara mivantana tamin’ilay famakian-trano teny amin’ny faritra Anosivavaka Ambohimanarina.
Ao anatina tambajotran-jiolahy mitam-piadiana…
Nosamborin’ny polisy izy roa lahy tratra tao amin’ilay fety famoran-jazalahy dia nanoro ny namany iray tsy lavitra teo ka noraisim-potsiny koa ny jiolahy iray naman’izy ireo. Ity tratra farany ity indray avy eo no nanoro ny tranon’ny namany miisa roa ka saron’ny polisy koa ireo jiolahy hafa naman’izy ireo. Nitohy hatrany ny famotorana nataon’ny polisy ka tratra daholo ireo jiolahy tompon’antoka tamin’ny vaky trano teny an-toerana. Rehefa nentina teny amin’ny polisy misahana ny heloka bevava (BC) indray ireto jiolahy ireto dia fantatra fa efa mpanao fanafihana mitam-piadiana eny amin’iny faritra Ambohimanarina sy ny manodidina iny ary ao anatina fikambanan-jiolahy mitam-piadiana mahery vaika. Ny volana mey lasa teo, jiolahy telo hafa (naman’ireo jiolahy) no tratran’ny polisy ka efa nidoboka eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy.